Ilitye elipholileyo lijongene nendlwana ekwiLake Bomoseen.
Ukuhamba ngokugqibeleleyo kubantu ababini. Umntwana omnye okanye ababini ukongezelela kulungile. Ibhedi yesileyi elingana neKumkanikazi kwigumbi lokulala. Kukho i-daybed elingana newele kwigumbi lokuhlala elisezantsi kunye nesofa kwigumbi lokuhlala elikumgangatho ophezulu, hayi indawo yokutsala.
I-Boat slip, i-kayaks, i-canoe, ukubhukuda kunye nommandla wokuloba ziyafumaneka izindlu ze-4 kumntla we-cottage-100 yeeyadi.
I-Pico/Killington, ukuloba, ukukhwela ihashe, ukuhamba ngekhephu konke kufutshane. Ngokwenene indawo ye-4 yexesha lokuzonwabisa.
IYunivesithi yaseCastleton ikwimizuzu esi-7 kude.
Igumbi lokulala kunye nendawo encinci enebhedi yosuku zikwinqanaba elisezantsi lekhaya apho uhamba khona. Kumgangatho ongentla ligumbi lokuhlambela, ikhitshi / indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala. Kukho ii-tv ezi-2 endlwini kwaye umgangatho omkhulu ojonge empuma nangasentla unezitulo ezi-4 ze-Adirondack kuyo. I-grill ikwiveranda yangasemva.
Eli gumbi lijongene nelitye likunxweme oluseNtshona lweLake Bomoseen. Ayikude kakhulu kwiPaki yeSizwe kunye nokufikelela kwizikhephe eGreen Dump. Kukho i-marina ekufutshane apho kunikezelwa khona iirenti zezikhephe. Ivenkile yeRobos ekuqaleni kwendlela yindawo entle ye-ayisikrimu, iisandwich, ikofu kunye nezinye izinto zokutya- ngoku zibonelela ngenkonzo yokuhanjiswa.